Madaxa howl-galka AMISOM oo booqasho ku jooga Baydhabo – Radio Daljir
Madaxa howl-galka AMISOM oo booqasho ku jooga Baydhabo
Maajo 28, 2015 1:03 b 0
Khamiis, May 28, 2015 (Daljir) —Mas’uulka ugu sarreeya xafiiska Qaramada Midoobay ee caawinta AMISOM, Amadou Kamara ayaa shalay booqasho ku tagay degmada Baydhabo ee Gobolka Bay, isagoo la kulmay saraakiisha ugu sarreysa Ciidamada Itoobiya ee Qaybta ka ah howgalka AMISOM ee Somalia.
Booqashada Amadou Kamara oo ahayd mid uu ugu kuurgalayay sida howgalka uu u socdo ayaa kala Hadlay Taliyaha aagga Saddexaad ee AMISOM Yemane Gabre Mikael sida ay u socdaan howlgallada amni iyo dagaallada lagula jiro Al-shabaab.
Mr. Kamara ayaa xusay inuu kala hadlay Gabre Mikeal howlgallada iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin ciidamada ka howlgalaya Gobollada Bakool, Bay iyo Gedo oo ay ka howl-galaan ciidamada Itoobiya.
“Waxyaabhihii aan kala hadlay Yemane Gabre Mikael waxaa ka mid ahaa taageerada ay u baahan yihiin ciidamada gobolladan ka howlgala, runtiina ammaan ayaa ka jira magaalada Baydhabo,” ayuu yiri Amadou Kamara.
Sidoo kale, taliyaha ciidanka Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM Gabre Mikael ayaa xusay inay ka Mahad-celinayaan Booqashada Madaxa Xafiiska Qaramada Midoobay ee caawinta AMISOM, ayna dhammaan waxyaabihii ay kawada hadleen isku Af-garteen.
Ciidamada Itoobiya ayaa ka mid Noqday Howgalka Midowga Afrika AMISOM billowgii sannadkii hore ee 2014-ka, iyagoo horay ugu sugnaa Somalia iyagoo aan howlgalka qayb ka ahayn, waxayna hadda ka howlgalaan gobollada dhexe iyo kuwa Koonfurta Soomaaliya ku yaalla.
Ugu dambeyn, Booqashadaan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo Golaha Ammaanka ee QM ay muddo kordhin u sameeyeen joogitaanka xafiiska QM ee Soomaaliya (UNSOM); iyadoo la sheegay in tan iyo bisha Ogoosto ee sannadkan ay sii shaqeyn doonaan.
DHAGAYSO: Barnaamijkii Saaka iyo Dunida _Khamiis 28